Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana asa soa | Martech Zone
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana asa soa
Talata, Febroary 1, 2011 Talata, Febroary 1, 2011 Douglas Karr
Mihazakazaka amin'ny lalana hafa ny olona sasany rehefa asaina manao asa soa. Tsy misy te-handany tolakandro, andro, na faran'ny herinandro miala amin'ny fanaony andavanandro. Na be atao loatra izy ireo, na tsy te hanokana fotoana amin'ny zavatra tsy hahasoa azy ireo amin'ny lafiny sasany. Tsy hoe rehefa tsy karamaina ianao amin'ny asa ataonao, dia tsy midika izany fa tsy misy tombony azo.
Faran'ny herinandro vitsivitsy lasa izay, nandany 48 ora iray manontolo aho, niaraka tamin'ny vondrona hafa, nanangana tranokala niasa feno ho an'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra. Nantsoina hoe Refresh Weekend ity hetsika ity ary i Justin Harter no nandrindra. Tamin'io faran'ny herinandro io, fikambanana mpanao asa soa efatra no nomena tranonkala mahafinaritra izay mifanentana tanteraka amin'ny filan'ny fikambanana tsirairay avy.
Na dia tsy nokaramaina aza aho nandritra ireo 48 ora ireo, ity no fomba nahazoako tombony tamin'ny hetsika:
Uber Networking - Nihaona amina mpamorona, mpamorona ary mpamorona sary maro aho tao amin'ny Refresh Weekend. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia samy nanana ny fahaiza-manao tsy manam-paharoa nentiny teo ambony latabatra. Ireo rehetra ireo dia misy ankehitriny sy misy ifandraisany amin'ny indostria iasako. Tsy hoe nahare ireo olona ireo miresaka momba izay fivelomany fotsiny aho fa nahita azy ireo nandeha tamin'ny resaka. Ankehitriny dia manana antoka aho fa fantatr'ireto olona ireto ny zavatra ataony. Io tombontsoa io irery dia tsy azo soloina.
Kickback - Isaky ny misy fiantrana lehibe, dia matetika misy ny fanambarana an-gazety na ny fanambaràna karazana. Tao anatin'ny fitsangatsanganana iray dia fantatra ny anaranao ary aseho ny asanao. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny kickback avy amin'ny fiantrana dia azo inoana fa avy amin'ny mpihaino izay tsy tratranao teo aloha. Amin'ny fisafidianana ny hanampy fanampiana, azo atao ny mahazo mpihaino an'io tambajotra mpanao asa soa io.
Tsara ihany izany - Mahazo fahatsapana mahatalanjona tokoa aho rehefa manampy olona izay tena mendrika izany. Hitako fa sarotra ny sendra io fahatsapana io. Tsara kokoa noho ny mijery ny olon-tianao manokatra ny fanomezana novidinao tamin'ny Krismasy maraina, dia atreho izany. Hasiaka kokoa izao tontolo izao raha tsy misy fiantrana sy fanomezana. Mety tsy hahazo karama amin'ny asanao ianao, saingy mbola misy tombony azo avy amin'izany.
Serivisy mailaka tsotra Amazon - SMTP ao amin'ny rahona
Geotoko: Fanentanana miorina amin'ny sehatra maro
1 Mey 2011 tamin'ny 3:00 hariva
Manaiky tanteraka, Stephen, ary tena faly aho fa anisan'ny ianao DK New Media ary manampy amin'ny tetik'asa toa izao. Ampiako ihany fa misy ny fotoam-pandraharahana lehibe miaraka amin'ireo fikambanana mpanao asa soa - matetika ny mpitarika orinasa dia mifandray amin'ny orinasa fantatr'izy ireo fa mpanao asa soa.
Apr 5, 2011 ao amin'ny 1: PM PM
Izaho dia nandray anjara intelo tamin'ny fanaovana asa an-tsitrapo ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa sasany izay tsy tiako hotononina ireo anarana ireo. Ny fahatsapana dia mahazatra loatra ary mahafa-po. Tsy misy vola any ary tsy tokony antenainao aloha. Ny zava-dehibe dia azonao atao ny mandray anjara satria tsy ny olon-drehetra no mahavita an'izany ary afaka mankasitraka izany. Raha te-hamokatra bebe kokoa amin'ny hafa ianao, maninona raha mandany fotoana amin'ny fanaovana asa soa.
Kodiarana ho an'ny faniriana